“Messi waa ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda” – Thiago Silva oo amaan kala dul dhacay Lionel Messi – Gool FM
“Messi waa ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda” – Thiago Silva oo amaan kala dul dhacay Lionel Messi
(Brazil) 30 Juunyo 2019. Xiddiga reer Brazil ee Thiago Silva ayaa amaanay xiddiga reer Argentina Lionel Messi, kahor kulanka ay ku wada ciyaari doonaan wareega afar dhamaadka ee Copa America 2019, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda kubadda cagta adduunka.
Lionel Messi ayaa la kulmay eedeymo xoogan, sababa la xiriira qaab ciyaareedkiisa aan wanaagsaneyn tan iyo markii uu bilaawday Copa America 2019, inkasta uu xulka qaranka Argantina uu soo baxay wareega afar dhamaadka oo ku wajahayaan martigaliyaasha tartankan ee Brazil arroornimada maalinta Arbacada ee soo aadan.
Hadaba Thiago Silva oo kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka la wada sugayo ee SuperClásico ayaa wuxuu saxaafada u sheegay:
“Aniga ahaan, Messi waa ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee taariikhda, iyo sidoo kale laacibkii ugu fiicnaa ee aan abid arko”.
“Laakiin haatan, waxaa jira kulan u dhexeeya xulalka Brazil iyo Argentina, waxaana iska ilaabi doonnaa jaceylka kulamada soo socda”.
Yeelkadeeda, Inkastoo Messi uu dhaliyay kaliya hal gool oo kaliya afartii kulan uu kasoo ciyaaray Copa America 2019, hadana Thiago Silva ayaa maanay awoodda ciyaareed ee kabtanka xulka qaranka Argantina.
“Mar kasta oo aan wada kulanno, hadii ay ahaan lahad labadaba xulka qaranka ama tartanka Champions League, aad ayay u adag tahay inaad la ciyaarto”.
“Istaag, Adigu waad weyn tahay saaxiibkay”... Neymar oo fariin uu ku garab istaagayo la wadaahay Luis Suarez